Yintoni enokuyenza xa ibonakala ebomini nakwi shishini? Yintoni enokuyenza xa yonke into imbi, kwaye ungafuni ukuhlala?
Mhlawumbi, akukho mnye umntu ehlabathini oye wazibuza yona umbuzo: "Yintoni enokuyenza xa yonke into embi emphefumlweni?". Kukho izizathu ezininzi zezi zinto, ayikwazi ukusebenza ngaphandle kobomi bodwa, ishishini okanye emsebenzini. Ukuba unesimo esifanayo, musa ukuphelelwa lithemba, kuhlale kuphuma indlela.
Yintoni enokuyenza xa yonke into embi ebomini bakho?
Ukuba ubomi bakho bobuqu abuyi kudibanisa, ngoko into yokuqala kufuneka uyiqonde isizathu sesisiphumo.
Okokuqala, cingisisa malunga nesiqingatha sakho sesibini kufuneka sibe kuyo, apho ummandla usebenza khona, yiziphi iimpawu ezifunekayo. Jonga ngeso lengqondo kwisicatshulwa sakho umfanekiso wesahlulo sesibini. Cinga ukuba lo mntu ukhangeleka njani. Emva kokuba umfanekiso ugqityiwe, qala ukusebenza. Qala ukutyelela iintlobo zeemeko zenkcubeko (amakhonsathi, imibukiso, iminyuziyamu), yenza ukuba uqhagamshelane nabantu abatsha.
Kufuneka uhlale ukulungele ukudibana nesinye isiqingatha, ngoko jonga, zithenge iingubo ezintle, kuba, ngokutsho kobulumko bendoda, bahlangana kwiingubo.
Zama uhlala ukhangeleka. Okokuqala, kuya kwandisa ukuzithemba, kwaye okwesibini, isondo esahlukileyo siya kuqala ukunyamekela.
Kwaye enye ingcebiso, musa ukuchitha ixesha lakho kubaviwa abangafanelekanga, mhlawumbi zonke iinzame zenu ziya kuba zilize.
Kuthekani ukuba yonke into embi emsebenzini?
Nantoni na into ongayithethayo, kwaye kumsebenzi umntu uchitha ixesha elide. Ngamanye amaxesha kuvela ukuba izinto ezisemsebenzini azibalulekanga. Unokuphazamisa isimo sengqondo somqhubi, okanye kwiqela lakho kukho umntu ocaphukisayo, kangangokuba awufuni ukuya emsebenzini. Ndingathini, ukuba yonke into imbi emsebenzini?
Ngelishwa, ngexesha lethu kuphela abantu ababutyebi abanakho ukukwazi ukusebenza. Ukuba awufuni ukuba imeko yakho yezemali ihlahloke ngokukhawuleza, kwaye unamatyala, ngoko uya kufuneka usebenze.
Inkokheli ikukhetha? Emva koko kufuneka ufune isigqibo sokuba ngaba i-quibbles yakhe isiseko okanye ayikho. Ukuba unobulungisa, zama ukuzilungisa. Mhlawumbi ungeyiphumeli ekusebenzeni kwemisebenzi yakho, ngoko ke kumsebenzi wakho kukho iiphoso ezininzi kunye neziphene. Ukuba unobungozi kwinto ethile, ke unganqikazi ukucela uncedo kunye neengcebiso kubalingane. Njengoko ubulumko bulumko buthi, akusiyo iitshati ezingcwele ezitshiswayo. Yonke into ingafundwa, kuya kuba nomnqweno. Oku kubi ngakumbi xa kungekho mnqweno wokusebenza.
Kwenzeka ukuba umntu akasebenzi ngokuvumelana nomsebenzi wakhe. Abazali bafuna ukuba bangene eyunivesithi ehloniphekileyo, kwaye uqeqesho olufundileyo alukho konke okuthandayo.
Ndingathini na? Kule meko, kufuneka uqonde oko uyithandayo, kwaye uzama ukuzibonela kule shishini. Khumbula ukuba ubomi bubunye, ngoko ke uzama ukuphilisa ngokusemandleni akho. Umsebenzi kufuneka ulethe uvuyo kunye nokwaneliseka.
Yintoni enokuyenza xa kukho konke okubi kwi shishini?
Imiba xa umntu ebeka amandla akhe nemali kwishishini, kwaye ayimbuyiseli ingeniso, kuninzi. Abaninzi bavele "behla izandla zabo" ekungathembeki. Okokuqala, zama ukuphumla kancane kwaye ungacingi ngeengxaki eziye zagutywa kuwe. Ndikholelwe, emva kokuphumla, uya kuhlala ufumana iingcamango ezicingayo kunye neembono malunga nokuphuma kwimeko yangoku. Ukuba ingcinga yakho yebhizinisi ayisebenzi, ke uzama ukuqonda ukuba yintoni imbangela yezithintelo. Xa ufumene isizathu, uya kukwazi ukufumana isisombululo esifanelekileyo sokupheliswa kwayo.
Yintoni enokuyenza xa yonke into embi kwaye engafuni ukuhlala?
Ukuba unesixinzelelo eside, ongakwazi ukujamelana nayo, ngoko awukwazi ukwenza ngaphandle kwenkxaso yeengcali. Qiniseka ukuba ufuna uncedo lwezonyango kugqirha wakho. Ukudandatheka kukugula ngengqondo edla ngamanye amaxesha unyango unyango.
Indlela yokuqalisa ulwalamano olutsha emva kokuhlukana
Iingcebiso zengqondo: andinabangani
Oko ndiyicinga ngokuthenga
Tavolga: zokupheka, isicelo, inkcazo
Umculi odumile uStas Pyekha
Ukuhambelana kwentlanzi yamadoda kunye neentlanzi zentlanzi